Shina CPLA Shina vita amin'ny Plastika tsy misy plastika azo alaina azo alaina vita any Chine Gianty
CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy alikaola azo averina
Ny asidra poly-lactic crystallized, na CPLA, dia polymer miorina amin'ny zavamaniry ampiasaina amin'ny hoso-doko. Ny koba CPLA compostable dia matanjaka ary mafy orina amin'ny fandefasana hafanana amin'ny hafanana. Ny koba kely vita amin'ny plastika tsy misy plastika dia azo ampiasaina amin'ny kafe mpizara, tsindrin-tsakafo kely, sakafo maraina, gilasy-crème ho an'ny sakafo ivelany na anatiny.
PLA dia bioplastic compostable izay noforonina avy amin'ny siramamy zavamaniry. PLA dia fanafohezana ny asidra polylactic izay vita amin'ny siramamy toy ny voanio katsaka, siramamy na siramamy. Ny katsaka indostrialy no loharanom-bokatra voalohany amin'izao fotoana izao izay mamboly mampiasa fambolena maharitra toy ny:
Famerana ny famonoana pesticides sy ny rano betsaka
Tsy avy amin'ny tany manana biodiversity avo na faritra karbonika avo.
Hialana amin'ny fizotran'ny fambolena agressive.
Mitantana famoahana entona maitso ao amin'ny toeram-piompiana.
Mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny asa mafy.
Fiarovana ny tontolo voajanahary manodidina ny toeram-pambolena.
Ity sotro sa kafe ity dia mety ampiasaina ho an'ny kafe sy ny tsindrin-tsakafo kely. Ity sotro-saosy gilasy ity dia mety ampiasaina amin'ny gilasy sy ny tsindrin-tsakafo kely. Izy io dia ampiasaina koa amin'ny santionany na haingo. Ity voromahery nitazana ity dia mety ampiasaina amin'ny saosisy na atody.
SGS dia orinasa multinational iray miasa any Genève, Soisa izay manome tolotra fisavana, fanamarinana, fanandramana ary fanamarinana. Ny serivisy atolotry ny SGS dia misy ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ny habetsaky ny lanjany, ny lanjany ary ny kalitaon'ny entana amidy, ny fitsapana ny kalitao sy ny fampisehoana amin'ny fenitra ara-pahasalamana, fiarovana ary fitsipi-pitondrana, ary hahazoana antoka fa ny vokatra, rafitra na serivisy dia mahafeno fepetra takian'ny fenitra napetraky ny governemanta, vondron-drafitra na amin'ny mpanjifan'ny SGS.
Item Sotro kafe CPLA 5 santimetatra
Color Fotsy. Black.Colored
Isan'ny carton 2000 pcs
Haben'ny baoritra 27 * 27 * 19.5cm
Item CPLA Spike-crème
Haben'ny baoritra 24 * 24 * 16cm
Item CPLA Saw forkà
Haben'ny baoritra 35 * 14 * 18.5cm
Previous: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina 6 santimetatra
Manaraka: CPLA + Bamboly akorandriaka mifototra amin'ny plastika tsy misy kitapom-batsy azo refesina 7 santimetatra